Réseau Soa : nanofana tanora mpitarika | NewsMada
Réseau Soa : nanofana tanora mpitarika
Vita, omaly teny amin’ny Lycée agricole Ambatobe, ny dingana fahenina farany amin’ny fanofanana nomen’ny Réseau Soa, ireo tanora mandrafitra ny politika ho fampandrosoana ny any ambanivohitra. Tanora avy amin’ny faritra Bongolava, Menabe ary Analamanga miisa 16 nofanina hitarika ny tanora namany any amin’ireo toerana niaviany ireo. Nahazo famatsiam-bola avy amin’ny Vondrona eoropeanina ny Réseau Soa, manana tetikasa ho fampandrosoana ny any ambanivohitra. Tontosa ny fanofanana ireo andiany voalohany ireo, nahavitana dingana enina, ho tanora mpandrindra, mahay mitantana sy tompon’andraikitra any ambanivohitra amin’izay fandaharanasa hahitan’ny tanora tombontsoa. Tanjona ny fampandraisana anjara azy ireo manomboka any ifotony, faritra sy eto amin’ny firenena.
Nifidy azy ireo nanaraka izany fiofanana izany ny fikambanana misy azy avy any amin’ny faritra niaviany. Nifantenana azy ireo ny fianarana vitany, fahavitrihany, fananany fotoana, fahaizany mizara sy fisokafany amin’ny hafa. Politika nofaritana tamin’ny fiofanana, mahakasika ny tontolon’ny fambolena, fiompiana ary ny jono. Paikady hoentina amin’izany ny fahaizana miteny, mijoro maneho hevitra, mijery ny tandrify azy. Nofanina ho tompon’andraikitra sy ho lohany izy ireo mifanaraka amin’izao vanim-potoana ankehitriny izao.
Tanora any Bongolava
“Betsaka ny tanora any Bongolava vonona hiasa amina sehatra maro, anisan’izany ny fiompiana trondro, akoho. Sakana anefa ny tsy fahitana famatsiam-bola, tsy fandriampahalemana, eo koa ny tahotra sao tsy mahomby”, hoy i Tatamo, mpikambana ao amin’ny APDIP*. Nahazo tohana tamin’ny Réseau Soa io fikambanana io amin’ny fampitaovana sy fanofanana. Olana iray lehibe mampiverin-dalana koa, ny tsy fandriampahalemana. Manana andraikitra tandrify azy ny rehetra raha ho an’izany fampandrosoana ny any ambanivohitra izany, fa tsy asan’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ihany.
APDIP* : Association des paysans pour le développement inter-professionnels.